Quarantine: Fotoana handehanana hiasa | Martech Zone
Quarantine: Tonga ny fotoana hiasana
Alarobia, Martsa 18, 2020 Alarobia, Martsa 18, 2020 Douglas Karr
Ity dia, tsy misy isalasalana, ny tontolon'ny orinasa tsy mahazatra sy ny ho avy mampiahiahy izay vavolom-belona tamiko. Izany dia nilaza fa mijery ny fianakaviako sy ny namako ary ny mpanjifako mizara roa aho:
Hatezerana - ity, tsy isalasalana, no ratsy indrindra. Mijery olona tiako sy hajaiko am-pahatezerana fotsiny aho manenjika ny olon-drehetra. Tsy manampy na inona na inona izy io. Izao no fotoana tokony hanehoanao hatsaram-panahy.
nalemy - olona maro no manana a andraso dia jereo toetra ankehitriny. Ny sasany amin'izy ireo dia miandry ny famonjena azy… ary matahotra aho fa tsy hisy olona hanao an'izany.
Work - Mijery ny hafa mihady aho. Rava ny renirano fidiram-bolan'izy ireo, mitady fomba hafa izy ireo hahatafavoaka velona. Ity no maodiko - Miasa andro aman'alina aho amin'ny fanondrotana fidiram-bola hafa, ny fandaniam-bola, ary ny fampitomboana ny loharanom-bola sisa tavela.
Nakatona ny fivarotana sy ny birao mba hanatsarana ny fiolahana ary hanalavirana ny fiaraha-monina mba hampihenana ny fiparitahan'ny Viriosy Corona, tsy manan-tsafidy afa-tsy ny mijanona ao an-trano ny olona. Na dia mety handevina orinasa maro aza ity dia tsy haiko ny manontany tena hoe maninona ireo orinasa no tsy misy fanapahan-kevitra ary manararaotra an'io fotoana io mba hamolavolana, hanavao ary hampiharana.
Ny iray amin'ireo mpanjifako manan-danja dia tokony hamela ahy handeha hitsimbina ny vola miditra izay miankina amin'ny sekoly fotsiny. Niantso ahy manokana ny CEO mba hanazava ny zava-misy. Tsy maintsy niaro ny orinasany izy. Tsy isalasalako fa io no fanapahan-kevitra mety ary nampahafantariko azy fa, tsy andoavako vola, ho afaka handray izay tetezamita na fampiharana izay hanampy azy ireo aho.
Vao namoaka vokatra mivantana ho an'ny mpanjifa ity mpanjifa manokana ity. Niadana sy niniana natao ny tsy hampiroborobo ny vokatra hizaha toetra sy hanatsara ny fahaiza-miasa ary hiantoka ny fampidirana azy tsara amin'ny lalan'ny famokarana ataon'izy ireo. Nozaraiko tamin'ny ekipany fa izao no fotoana mety indrindra hanitsahana ny lasantsy. Izao no antony:
Kely fikorontanana - miaraka amin'ireo ekipa taolana sy kaomandy kely tonga, ny fandefasana rindrambaiko automatique marketing ho fampiroboroboana ny vokatra dia tsy hanelingelina ny mpiasa ao anatiny. Azon'izy ireo tantana tsara kokoa ny firongatry ny olana amin'ny fandefasana ny vokatra vaovao sy ny rafitra vaovao hanohanana azy.
Fotoana ho an'ny fanabeazana - miaraka amin'ireo mpiasa miasa ao an-trano, tsy afaka manatrika fivoriana, ary tsy variana amin'ny olan'ny birao, ny mpiasa dia manana fotoana tsy ampoizina hanatrehana fiofanana sy hampihatra ny vahaolana ilain'izy ireo. Izaho dia nanangana fampisehoana ho an'ny mpiasa anatiny hanatrika ary mamporisika ny mpivarotra ahy hanampy azy ireo handamina fotoana hanatrehana.
Fanodinana automatique - Tsy mino aho fa hiverina any raharahambarotra toy ny mahazatra aorian'ity hetsika ity. Miatrika resa-be azo ihodivirana eran'izao tontolo izao isika, fijery ilaina amin'ny fitokanana ireo rojom-panolorana, ary ny fandroahana mety hiarovana ireo orinasa tsy hidina ambany. Ity no fotoana mety indrindra amin'ny fampiasam-bolam-bola be sy amin'ny fanatsarana ny fizotran'ny asany mba hahafahan'izy ireo manohy ny famokarana sady mampihena ny vidiny.
Orinasa: Tonga ny fotoana hiasana
Ampirisihiko ny orinasa rehetra any mba hiasa. Ny mpiasao miasa ao an-trano, manana fifandraisana, ary mety ho variana amin'ny fampiharana sy fiofanana amin'ny sehatra vaovao. Ny ekipa fampidirana sy fampiharana dia miasa lavitra be amin'izao fotoana izao, noho izany dia vonona ny mpifanaraka hanampy anao. Ny orinasako, Highbridge, dia tonga miaraka amina hevitra fampidirana sasany hihaonana amin'ireo vahaolana amin'ny faharanitan-tsaina hanampiana ireo orinasa manana tontolon'ny asa lavitra.
Mpiasa: Tonga ny fotoana hikatsahana ny ho avinao
Raha olona tandindomin-doza ianao, izao no fotoana hitsambikanao. Raha bartender na mpizara ohatra aho ohatra… hitsambikina amin'ny Internet aho ary hianatra varotra vaovao. Azonao atao ny miandry famonjam-bola, saingy fanamaivanana izany… tsy vahaolana maharitra amin'ny olana mahazo anao. Amin'ny indostrian'ny teknolojia dia mety hisoratra anarana maimaim-poana izany Làlan-kizorana amin'ny Salesforce, maka kilasy kaody maimaim-poana amin'ny Internet, na mianatra manokatra ny fivarotanao manokana amin'ny Etsy.
Tsy fotoana ho an'ny Playstation sy Netflix izao. Tsy izao no fotoana tezitra na mararin'ny paralysisa. Tsy misy mahasakana ny fahatezeran'ny Natiora Natiora. Tsy azo ihodivirana io na tranga hafa mampidi-doza. Fotoana iray hanararaotana ny fiainantsika andavan'andro tapaka io hirosoana io. Ireo olona sy orinasa manararaotra amin'izao fotoana izao dia hitsangana haingana noho izay noeritreretin'izy ireo.
Tags: automatiqueCoronavirusCovid-19fikorontananafanabeazanaareti-mifindravalin-teny pesta